इन्साफ, विकास र प्रगतिको गति « Janata Samachar
इन्साफ, विकास र प्रगतिको गति
प्रकाशित मिति :2September, 2019 6:58 am
इन्साफ, विकास र प्रगति हाम्रो आदर्श हो । पारिवारीक हित र सामाजिक न्याय जनताको आवश्यक हो । समाजमा बाँच्नको लागि आवश्यक वस्तुको समान वितरण नै सामाजिकक न्याय हो । समाजमा हुने विभिन्न घट्ना , दुर्घटना र परिवेशका मुद्दामा अनुसन्धान गरी जनतालाई न्याय दिने सवालसहित यहीभित्र पर्छ । मान्छेलाई सबै सहन सजिलो हुन्छ तर अन्याय सहन गाह्राे हुन्छ । चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस् या सार्वजनिक । जीवनमा अन्याय सहनु अति नै दुष्कर कार्य हो । व्यक्तिमा निहीत अहम्, कुण्ठा तथा मनोपोली भावनाका कारण पार्टीभित्र न्याय कठिन भएको अवस्था छ ।
पार्टीभित्रको न्यायको छाप र प्रभाव नै सामाजिक व्यवस्थामा पनि देखिन्छ । पार्टीमा नेताका गुण, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा नै जनताले विचार तथा दृष्टिकोण बनाउँछन् । शासकको कर्मको प्रतिकृया जनताले मतदान र सडकवाट दिन्छन् । त्यसमा अरूले त अलिकति घिउ चिनी थप्ने मात्र हो । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउँछ । पार्टीको प्रभाव नै सरकारमा पर्छ । अनि सरकारको काम र त्यसको परिणाम हेरेर नै जनताले पार्टीबारे आफ्नो धारणा बनाउँछन् ।
हामीले पीडितको सुरक्षा, अझ बढी गरिबको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छौ । निश्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय, जनतालाई समान अधिकारको आवाज बुलन्द गरेका छौं
हामीले सत्य, न्याय र समानतालाई आफ्नो आदर्श बनाएको हो । सबै किसिमको त्याग तपस्या र बलिदान त्यसैका निम्ति गरेका हौ । सबै विरोध, प्रतिरोध तथा आक्रमण त्यसैको लागि गरिएको हो । निश्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय अनि सबै जनतालाई समान अधिकारको आवाज बुलन्द गरेका हौं । हामीले पीडितको सुरक्षा, त्यसमा पनि अझ बढी गरिबको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छौ ।
हामीमा अहिले सेवाभाव भन्दा स्वार्थ बढेको अवस्था छ । अझ कमाउ, खाउ र रमाउ चरित्र मौलाउन थालेको छ । पार्टी, देश र जनताको नाममा विगतमा गरिएको त्याग, तपस्या र बलिदान मजाक पो थियो की ? भन्ने भान हुन थालिसकेको छ । राष्ट्रियता,जीविका र जनवाद नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबभन्दा मन पराइएको नारा हो । राष्ट्र जोगाउने, राष्ट्र बनाउने अनि राष्ट्रलाई सुन्दर ढंगले सिगार्ने हाम्रो पहिलो एजेण्डा थियो । जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूतिसहितको जीविकाको व्यवस्था हाम्रो प्रतिवद्धता थियो । जनतालाई पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारसहित गास, वास, कपास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने हाम्रो अठोट थियो । नेतृत्वमा आफूले बोलेको कुरा नै राष्ट्रियता ठान्ने प्रवृति छ । आफूले राज्यमा बसेर प्राप्त गरेको उपलब्धि नै लोकतन्त्र, अनि आफूले प्रयोग गरेको सेवा र सुविधा सबैले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सोच देखिएको छ । यस्तो प्रवृति र सोच र केवल प्रवचन गर्न पाउने हक मात्र हो । आफ्नो प्रशंसा अनि दलीय स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र ठान्ने दृष्टिकोण नै अहिलेको परिवेशको कारण हो ।
लोकतन्त्रमा जनताको सम्मान हुनुपर्छ । स्वतन्त्रताको रक्षा अनि सम्मतीको शासन हुनुपर्छ । जब शासकले लोकतन्त्रलाई आफ्नो कमाई ठान्छ, पटकपटक दोहन गर्न थाल्छ । त्यो जनतालाई पच्दैन । जनता तुरुन्त बोल्दैन तर विद्रोह गरेर देखाई दिन्छन् । हामीले राजनीति पीडितको नाममा लिएको सेवा, जेल बसेको आधारमा प्राप्त गरेको सुविधा, प्रवासमा बसेको कारणले, भूमिगत बसेको, जनयुद्धमा लडेको आधारमा प्राप्त गरेको राहत, शहादत, वेपत्तासहित अनेकौ आधार र कारण देखाउदै राज्यको ढुकुटीमा गरेको हस्तक्षेप जनताले देखिरहेका छन् । फेरि पनि त्यही आधार बताउँदै सत्तामा पनि बसिरहेका छौ । धन्दा चाँहि उही परम्परागत नै चलाउँछौ । जनताले कसरी धैर्य गर्छ ? त्यसैले अब संघर्ष र त्यागको बखानले होइन, जनताप्रतिको समर्पण र सुकर्मले मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ ।
जनता र जनताका लागि भन्दै गरिएको प्रवचन अनुसारको व्यवहार खोजिरहेका छन् । आन्दोलन र क्रान्तिका बेला देखिएको त्याग, समर्पण र लगाव खोजिरहेका छन् । तर हाम्रो ‘पोजिशन’ फेरिएको छैन । हामी जनतामा पुग्न छाडिसकेका छौ
विकासका ठूला सपना देखाउने, समानताका आधारमा विकास योजना बनाउन नसक्नु, विकास बजेटलाई जनताको माग र आवश्कताको विषय बनाउन नसक्नु र बजेट तथा कार्यक्रममा सत्ताशक्ति केन्द्रित हुँदा जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले जनता प्रविधियुक्त छन् । सचेत छन् । विश्वका कुनाकुना भएका घटना र प्रसङ्ग सजिलै थाहा पाउँछन् । जनतालाई सञ्चार माध्यमले सचेत र सजक बनाएको छ । जब एउटा जिल्ला भन्दा सिगो प्रदेश, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भन्दा सिगो प्रदेशको बजेट कम देख्छ । जनता स्वभाविक रूपमा आक्राेसित हुन्छ्न । कार्यकर्ता भजन गाएर बस्लान, समर्थक चुप लाग्न सक्ला तर आमनागरिकलाई भने त्यस्तो बाध्यता छैन ।
जनता र जनताका लागि भन्दै गरिएको प्रवचन अनुसारको व्यवहार खोजिरहेका छन् । आन्दोलन र क्रान्तिका बेला देखिएको त्याग, समर्पण र लगाव खोजिरहेका छन् । तर हाम्रो ‘पोजिशन’ फेरिएको छैन । हामी जनतामा पुग्न छाडि सकेका छौ । हामीलाई हाम्रा सल्लाहकार, हाम्रा गुटका साथी र केही औपचारिक बैठकका सहभागी भए पुग्छ । त्यसैमा भ्याई नभ्याई छ हामीलाई । सुशासनको लागि प्रशासन परिचालनमा व्यस्तता छ । जनताका आधारभुत आवश्यकतामा ध्यान पुग्न सकेको छैन । जनताले शासक तथा नेतृत्वका दैनिकक समाचार र प्रगति सुनिरहेका छन् । केमा कति खर्च भयो ? कस्ले कस्तो गाडी चढ्यो, कस्ले कताको जमिन मिलायो ? कस्ले कता ठूलो घर बनायो ? कस्ले कुन पद पायो, कति सुविधा खायो ? यस्ता समाचारले वाक्क भइसकेका छन् जनता । यस्तो सुन्दा उनीहरूलाई लाग्छ सरकारमा बस्ने र पार्टी नेतृत्वले पनि केवल आफ्ना लागि मात्र गर्दा रहेछन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचार मुलुक आमनेपालीको चाहना हो । ‘उड्ने गुड्ने पंचका घर, विचरा जनता तिर्छ कर’ भन्थ्यौ हामी । पञ्चहरुले भ्रष्टाचार गरे देश डुबाए भन्यौ । पञ्चायत ढालियो । बहुदलीय आयो । बदुललीय प्रजातन्त्रमा कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो। । कांग्रेसले निजीकरण उदारीकरण ल्यायो । पञ्चायती कालमा स्थापित उद्योग निजीकरण भए । संस्थानलाई समेत निजीकरण गरियो । निजीकरणसँगै उद्योग धन्दा बन्द हुन थाले । उद्योग धन्दामा कार्यरत बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आयो। मुलुकका स्थापित उद्योग बन्द गराएर जनतालाई वैदेशिक रोजगारीको बाटो देखाइयो । आत्मनिर्भरको गारेटो कोर्न लागेको मुलुक परनिर्भरतर्फ लाग्यो । मुलुक रेमिट्यान्समा धानिन बाध्य भयो ।
हामीले त्यसको विरोध गर्यो । यसै पृष्टभूमिमा पञ्चायत ढल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । राजा र तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध जनमत तयार भयो । राजतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिको वातावरण बन्यो । त्यसैको उपज हो २०६२/०६३ को जनआन्दोलन । आन्दोलनले राजतन्त्र गल्यो र ढल्ने अवस्थामा पुग्यो । मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएकाे डेढ दशक पुग्न लागेको छ ।
मुलुकमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ । दुई तिहाईको बलियो सरकार । तर पनि जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्रको प्रवचन र सुशासन तथा दिगो विकासको भाषण बाहेक जनताले केही पाएका छैनन् । जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यसको कारण पहिचान गर्न जरुरी छ । समस्याको पहिचान, कारणको खोजी र समाधानका लागि पहलकदमी नै असल शासनको चरित्र हो । शासकले बेलैमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।
संसारमा कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न छैन । अध्ययन गरेर या अनुभव गरेर नै हरेकले सिक्ने हो । सिकेर नै जान्ने हो । जानेको काम नै हामीले गर्ने हो । अहिले स्थिति केही बिग्रेको छ । तर हाम्रो पहुँच बाहिर गइसकेको छैन । सामुहिक रूपमा समाधानका उपाय खोजेर समस्या निराकरणतिर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि ‘हरेकले सबैका लागि, सबैले हरेकका लागि’ भन्ने सोचसहित अघि बढ्नु जरूरी छ ।
(पौडेल पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ)
फाइल तस्बिर काठमाडाैं । चैत ६ देखि शुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा